ကနေ့မနက် သတင်းတစ်ခုကြား ကြားချင်း နားမှာသိပ်ပြီးမယုံချင်ခဲ့ပါ - Lucky9
Homepage / Knowledge / ကနေ့မနက် သတင်းတစ်ခုကြား ကြားချင်း နားမှာသိပ်ပြီးမယုံချင်ခဲ့ပါ
By Lucky9Posted on March 6, 2019
ကနေ့မနက် သတင်းတစ်ခုကြား….. နားမှာသိပ်ပြီးမယုံချင်ခဲ့ပါ….
ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်လောက်က မြောက်ဥက္ကလာဆေး ရုံမှာ နှလုံးသွေးကြောတစ်ချောင်းပိတ်တယ် လို့ယူဆခံထားရပြီး သွေးကြောဓာတ်မှန်ရိုက် ဖို ဒီလကုန်မှပြန်လာပါဆိုပြီး တန်းစီဇယားသွင်းခံ ထားရတဲ့ ကျနော့်နောင်တော်သူငယ်ချင်း…. ပင်လုံဆေးရုံမှာသွေးကြောဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီး.. ကျနော့်လိုဘဲ သုံးချောင်းပိတ် တဲ့အတွက်… CABG( သွေးကြောဖြတ်ကျော်ခွဲစိတ်မှု)လုပ် ရပါမယ်…တဲ့…
ကျနော်ကဆေးလိပ်အလွန်အကျွံ သောက်လို့ပိတ်တာဆိုပေမယ့်…သူကတော့ဆေး လိပ်မသောက်ပါဘဲနဲ့ပိတ်ရပါတယ်…. ကျနော်ဆေးရုံမှာရှိနေစဉ်က ဆရာကြီးဦးတင် မောင်အေးရဲ့စကားသံတွေပြန်ပြီးကြား ယောင်မိပါတယ်….ငါတို့လူမျိုးက ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင်အလွန်အမင်းကြောက်တတ်ကြတယ်ဆိုပေ မယ့် ကျန်းမာရေးကောင်းနေတုန်းမှာတော့ ကျန်းမာရေးအသိအရမ်းနည်းကြတယ်… ကျမတို့အိမ်မှာ ဆီဆိုရင် ဆုံဆီမှ၊သံလွင်ဆီမှ၊ နေကြာဆီမှ ရှယ်မှာစားတာလို့ ဆိုကြပေမယ့် မနက် ဘရိတ်ဖတ်စ် စားရင်တော့ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် လောက် အီကြာကွေး၊စမူဆာ စားတာမျိုး… မြန်မာဆန်ဆန်ထမင်းကိုပဲဆီသန့်နဲ့ပဲပြုတ်နယ်ပြီး.. လမ်းထိပ်အကြော်ဆိုင်က အကြော်စားတာမျိုး.. သွေးတိုးမှာစိုးလို့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲမစားဘူး နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲဘဲစားတယ်….အကြော်နဲ့..တဲ့ အဲ့ဒီအကြော်၊အီကြာကွေး၊စမူဆာ ဆိုတာ တွေက တစ်အိုးကြော်ပြီးတိုင်း ဆီအသစ်လဲ တာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက် ပြည့်ဝဆီရာနှုန်းပြည့် ပါနေပါတယ်…
ဒါကြောင့်မို့ အဲ့သလိုဟာတွေ ကို တတ်နိုင်သလောက် မစားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါ တယ်…နောက်တစ်ခုက အိမ်ရှင်မများကိုအကူအညီ တောင်းချင်ပါတယ်…ကျနော်တို့မြန်မာမီးဖိုချောင် မှာ ငါးကြော်ကြသည်ဆိုပါစို့…ငါးကြော် ပြီးကျန်နေတဲ့ဆီညိုညိုတွေကို ငါးကြော်ဆီ မွှေးမွှေးလေး ဆိုပြီး ထမင်းနဲ့နယ်စားတာမျိုး အဲ့ဆီနဲ့ငါးကြော်နှပ်ဆက်ချက်မယ်၊ပြန်ကြော် လုပ်မယ်၊ချဉ်ပေါင်ကြော်မယ်၊ငါးပိချက် ချက်မယ် ဆိုတာမျိုးတွေ မလုပ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ… ငါးကြော်ထားပြီးတဲ့ဆီဟာပြည့်ဝဆီဖြစ်နေ ပါပြီ..မစားဘဲ စွန့်ပြစ်လိုက်တာဟာ ကျန်းမာရေးအ တွက်အကောင်းဆုံပါလို့အကြံပြုလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ…ကျနော်သည်ဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်မဟုတ် သည့်အတွက် ဆရာလုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ… ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရသောအတွေ့အကြုံနဲ့ဆရာဝန် ကြီးများရဲ့ဆုံးမသြဝါဒကိုပြန်လည်ဖောက်သယ် ချခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း….
Writer – သန်းထိုက်။ နှလုံးသွေးကြောသုံးချောင်းပိတ်၍ CABG လုပ်ထားပြီးတစ်လခွဲသာ သက်တမ်းရှိသေးသူ
ကနမေ့နကျ သတငျးတဈခုကွား….. နားမှာသိပျပွီးမယုံခငျြခဲ့ပါ….
ပွီးခဲ့တဲ့ဆယျရကျလောကျက မွောကျဥက်ကလာဆေး ရုံမှာ နှလုံးသှေးကွောတဈခြောငျးပိတျတယျ လို့ယူဆခံထားရပွီး သှေးကွောဓာတျမှနျရိုကျ ဖျို ဒီလကုနျမှပွနျလာပါဆိုပွီး တနျးစီဇယားသှငျးခံ ထားရတဲ့ ကနြေျာ့နောငျတျောသူငယျခငျြး…. ပငျလုံဆေးရုံမှာသှေးကွောဓာတျမှနျရိုကျပွီး.. ကနြေျာ့လိုဘဲ သုံးခြောငျးပိတျ တဲ့အတှကျ… CABG( သှေးကွောဖွတျကြျောခှဲစိတျမှု)လုပျ ရပါမယျ…တဲ့…
ကနြျောကဆေးလိပျအလှနျအကြှံ သောကျလို့ပိတျတာဆိုပမေယျ့…သူကတော့ဆေး လိပျမသောကျပါဘဲနဲ့ပိတျရပါတယျ…. ကနြျောဆေးရုံမှာရှိနစေဉျက ဆရာကွီးဦးတငျ မောငျအေးရဲ့စကားသံတှပွေနျပွီးကွား ယောငျမိပါတယျ….ငါတို့လူမြိုးက ကနျြးမာရေးနဲ့ ပတျသကျရငျအလှနျအမငျးကွောကျတတျကွတယျဆိုပေ မယျ့ ကနျြးမာရေးကောငျးနတေုနျးမှာတော့ ကနျြးမာရေးအသိအရမျးနညျးကွတယျ… ကမြတို့အိမျမှာ ဆီဆိုရငျ ဆုံဆီမှ၊သံလှငျဆီမှ၊ နကွောဆီမှ ရှယျမှာစားတာလို့ ဆိုကွပမေယျ့ မနကျ ဘရိတျဖတျဈ စားရငျတော့ တဈပတျတဈကွိမျ လောကျ အီကွာကှေး၊စမူဆာ စားတာမြိုး… မွနျမာဆနျဆနျထမငျးကိုပဲဆီသနျ့နဲ့ပဲပွုတျနယျပွီး.. လမျးထိပျအကွျောဆိုငျက အကွျောစားတာမြိုး.. သှေးတိုးမှာစိုးလို့ အုနျးနို့ခေါကျဆှဲမစားဘူး နို့စိမျးခေါကျဆှဲဘဲစားတယျ….အကွျောနဲ့..တဲ့ အဲ့ဒီအကွျော၊အီကွာကှေး၊စမူဆာ ဆိုတာ တှကေ တဈအိုးကွျောပွီးတိုငျး ဆီအသဈလဲ တာမြိုးမဟုတျတဲ့အတှကျ ပွညျ့ဝဆီရာနှုနျးပွညျ့ ပါနပေါတယျ…
ဒါကွောငျ့မို့ အဲ့သလိုဟာတှေ ကို တတျနိုငျသလောကျ မစားကွဖို့တိုကျတှနျးလိုပါ တယျ…နောကျတဈခုက အိမျရှငျမမြားကိုအကူအညီ တောငျးခငျြပါတယျ…ကနြျောတို့မွနျမာမီးဖိုခြောငျ မှာ ငါးကွျောကွသညျဆိုပါစို့…ငါးကွျော ပွီးကနျြနတေဲ့ဆီညိုညိုတှကေို ငါးကွျောဆီ မှေးမှေးလေး ဆိုပွီး ထမငျးနဲ့နယျစားတာမြိုး အဲ့ဆီနဲ့ငါးကွျောနှပျဆကျခကျြမယျ၊ပွနျကွျော လုပျမယျ၊ခဉျြပေါငျကွျောမယျ၊ငါးပိခကျြ ခကျြမယျ ဆိုတာမြိုးတှေ မလုပျကွပါနဲ့ခငျဗြာ… ငါးကွျောထားပွီးတဲ့ဆီဟာပွညျ့ဝဆီဖွဈနေ ပါပွီ..မစားဘဲ စှနျ့ပွဈလိုကျတာဟာ ကနျြးမာရေးအ တှကျအကောငျးဆုံပါလို့အကွံပွုလိုကျရပါတယျ ခငျဗြာ…ကနြျောသညျဉာဏျကွီးရှငျတဈယောကျမဟုတျ သညျ့အတှကျ ဆရာလုပျခွငျးမဟုတျဘဲ… ကိုယျတိုငျခံစားခဲ့ရသောအတှအေ့ကွုံနဲ့ဆရာဝနျ ကွီးမြားရဲ့ဆုံးမသွဝါဒကိုပွနျလညျဖောကျသယျ ခခြွငျးသာဖွဈပါကွောငျး….
Writer – သနျးထိုကျ။ နှလုံးသှေးကွောသုံးခြောငျးပိတျ၍ CABG လုပျထားပွီးတဈလခှဲသာ သကျတမျးရှိသေးသူ
Previous post ငွေကို ရေလိုသုံး၍ အလျှံအပယ် လှူဒါန်းနိုင် သောကျင့်စဉ် ဂါထာ တော်
Next post ရွှေဝယ်တိုင်း ဂျင်းထည့်လို့မရတဲ့ ပညာ